tamin'ny 5ora hariva noho ny famonoany ny rainy. Ny zoma 28 febroary 2020 dia nisy fifamaliana teo aminy sy ny rainy. Nitohy hatrany ny tsy fifankahazoana ka tsy vitan'ny fifamaliana am-bava intsony fa tonga hatrany amin'ny fifampikasihan-tanana. Tao anatin'izay no nandakan'ilay zanany lahy ny maha lehilahy ny rainy ka nahatonga ity farany ho tsy nahatsiaro tena. Nentina tany amin'ny hopitaly moa ilay rainy saingy tsy tana intsony ny ainy. Notadiavin'ny polisy avy ao amin'ny bc3 ilay tovolahy ka teny Ivandry no nahatraran’ny polisy azy. Nohadihadiana tany amin'ny polisy misahana ny heloka bevava izy ary natolotra ny fampanoavana omaly talata.